အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဝက်သားပူစီနံ ချဉ်စပ်သုပ်၊ ဝက်သားသစ်အယ်သီးကြော်
28 Responses to “ဝက်သားပူစီနံ ချဉ်စပ်သုပ်၊ ဝက်သားသစ်အယ်သီးကြော်”
တော်လိုက်တာ မချောရယ်.. အစ်မ ဘာပို့စ်ပဲတင်တင် စိတ်ဝင်စားစရာ အသစ်အဆန်းလေးတွေချည်းပဲ။ အစ်မနည်းလေး စမ်းချက်ကြည့်ဦးမယ်။ ကြည့်ရုံနဲ့တင် စားချင်တယ်။
Sis, you don't need to attend the cooking classes. You already can cook very well. Hmmm... I'm thinking I've tried waterchestnut or not. How is the taste of that?
Rose >> Water chestnut is also good. I've already tried it. Taste is really good. Try it. :P
ညီမ Snow, ညီမ Camomilla စမ်းချက်ကြည့်ပါ.. စားလို့ကောင်းပါတယ်..
လာအားပေးတာ အားလုံးကို ကျေးဇူးနော်..
ချွေးမလေး ရှင်နေတဲ့နေရာ ကိုယ်တိပီ ဖွလိုက်ရမလာ
:P :D ;) အသုပ်လေး စိတ်ဝင်စားတယ်
အသီးက ဒီမှာ မရလို့လေ
ဒီမှာလည်း သစ်အယ်သီးတွေ အရမ်းပေါနေပြီဗျ၊ ကြုံရင် စမ်းကြည့်ဦးမှပါ၊း) အဲဒါထက်စာရင် ဝက်သားပူစီနံသုပ် ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်၊ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် တံတွေးသီးတယ်...၊း)
ချောရေ.. ဟင်းလေးတွေကအဆန်းဘဲနော်... သစ်အယ်သီးနဲ့ ချက်တာတခါမှမစားဖူးဘူး... ပူစီနံနဲ့သုတ်တာတော့ ယိုးဒယားနဲ့ဆင်တယ်နော်....
ကျေးဇူးပါ မချောရေ... ချက်စားဦးမယ်.... ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရထဲက သွားရည်ကျနေပြီ။ :)
စာတွေဖတ်သွားပါတယ်,,,မချောလည်း Haveawonderful weekend ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ
သစ်အယ်သီးကဘာအရသာနဲ့ ဆင်သလဲဟင်၊ ပုံထဲမှာတော့ ဓညင်းသီးနဲ့ တူသလိုဘဲ။
အားလုံးစားချင်လာပြီနော်။ သိပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့ ချောရယ်..း)
သစ်အယ်သီးကို ၀ယ်ထားပြိး ဘယ်လိုစားရမှန်းမသိလို့အလှကြည့်နေရတာကြာပြိ
ညီမ ပို့ စ် ဖတ်ပြီးတော့ အမရဲ့ သစ်အယ်သီးတော့ ဘ၀ပြောင်းရှာတော့မယ်
သစ်အယ်သီးက ဆိမ့်ဆိမ့်လေးရယ်.. စားလို့ကောင်းတယ်.. သွားရေစာအဖြစ်နဲ့ စားတာများတယ်.. ဟင်းချက်တာတော့ နည်းတယ်.. ချောကတော့ ကြိုက်တယ်..
ဝက်သားနဲ့ သစ်အယ်သီးဆို သစ်အယ်သီးကိုရွေးစားဖြစ်တယ်..
၀က်သားရှောင်တာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့၊ မစားဖြစ်ဘူး မချောရေ အသားကြီးပဲ အဲလိုပူပူစပ်စပ်လေး သုပ်စားရရင်ကောင်းမှာနော်။
ဒါကြောင့်ပြောတာ ချောချက် :)
မကြီးချော...စားဖူးဖို့မပြောနဲ့ ခုမှမြင်ဖူးတော့တယ် :P
မဆိုးဘူး ကြုံရင်လက်တည့်စမ်းလို့ရပြီ :)
သစ်အယ်သီးက ဂျပန်မှာလည်း သိပ်စားကြတာပဲမရဲ့ ဒီလိုချက်တာပထမဆုံးသိတာ အစပ်သုပ်ကတော့ ဆက်ဆက်လုပ်စားပစ်ဦးမယ် ထိုင်းနည်းနဲ့ဆင်တယ်နော်
ချောရဲ့ ပူစီနံဝက်သားသုပ်မျိုး ရှုမ်းပြည်မှာစားဖူးတယ် သူတို့သုပ်တာ အရွက်တွေပိုစုံတယ် ပင်စိမ်းတို့ ဖတ်ဖိုင်တို့ပါတယ်..ရှမ်းငရုတ်ကောင်းပါတယ်..။ ချောသုပ်တဲ့နည်းမျိုးသုပ်စားဦးမယ် ခုဖတ်ရင်း သရေတောင်ယိုလာပီ...။
သစ်အယ်သီးကို အဲလို လုပ်စားလို့ရတာ ခုမှသိတယ်။ စာကောင်းမှာပဲ စိမ့်နေမှာပဲနော်။ ပူစီနံနဲ့ ဝက်သားသုပ်ထားတာလေးက အရောင်လေးတွေသိပ်လှတာပဲ။ အရောင် အနံ့ အရသာနဲ့ ပြည့်စုံမှာပါပဲ။ ဗိုက်ထဲမှာ ဂွီဂွီနဲ့ မြည်သွားတယ်။း)
တစ်ခါမှ မစားဖူးသေးဘူး။ လမ်းကြုံရင်တော့ မချောဆီ ၀င်စားဦးမယ်။း)
၀က်သားပူစီနံသုပ်တော့ အသေကြိုက်တယ်..း)). .မွှေးနေတာပဲ... ဟိုသစ်အယ်သီးနဲ့ကတော့ ကိုလက်စရောများမယ်.. လျှော့လျှော့.. ၀လာဦးမယ်.. :D
သွားရေလေးတွေ တောက်တောက်တောက်တောက် ကျအောင်ကိုဖြစ်သွားတယ်မချော။ ဝက်သားအရမ်းကြိုက် သုပ်ထားတာလေးစားချင်လိုက်တာ။
မချော ဟင်းတွေက အဆန်းလေးတွေ စားချင်တယ်
ဟင်းအထူးအဆန်းလေးတွေ လာကြည့်သွားပါတယ်။ ပူစီနာသုတ်ကတော့ တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ စားချင်စဖွယ်လေး။ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် မချောရေ။
အမရေ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ခုပဲ လုပ်စားမလို့ ပြန်လာရှာတာာ
တော်ရုံနဲ့ ရှာမတွေ့ဘူး ဖြစ်နေတယ်.. တစ်ရက်ချင်းစီပြန်ရှာရတယ်..း)
စားသောက်ဖွယ်ရာများထဲ Tag ပေးပါလား.. အမ..